Filimka Janatha Garage Jr NTR Wacdarihii Laga Filaayay Ayuu La Yimid Bandhig Ahaan - Hablaha Media Network
Filimka Janatha Garage Jr NTR Wacdarihii Laga Filaayay Ayuu La Yimid Bandhig Ahaan
HMN:- Filimka sida weyn ee loo wada sugaayay ee Super Star Jr. NTR hogaamiyaha ka yahay Janatha Garage ayaa maanta si rasmi ah tiyaatarada daafaha caalamka iyo gudaha Hindiya loo saaray.
Filimkaan Telugu ah balse luqado kala duwan lagu daawaday ayaa siweyn loo hadal haayay madaama labada Super Star Jr. NTR iyo Mohanlal awoodooda gaarka ah kusoo bandhigeen.
Jilaayaasha filimkaan: Janatha Garage starring Jr NTR, Mohanlal, Samantha Ruth Prabhu, Nithya Menen
Janatha Garage waa filim saameyn xoogan la yimid tan iyo markii goos gooskiisa lasoo bandhigay sidoo kalena Jr. NTR xiligaan waayihiisa ugu wacan ayuu ku jiraa waana sababta filimkaan qof walbo u xiiseenayo daawashadiisa.
Hadaba aan isla fiirino sheekada filimka Janatha Garage iyo fariinta guud ee uu xambaarsan yahay:
Satyam (Mohanlal) waa nin kasoo jeedo tuulo baadiyo ah wuxuuna usoo guuraa magaalada weyn Hyderabad si uu noloshiisa u hormariyo.
Satyam (Mohanlal) magaalada Hyderabad wuxuu ka furanaa garaash ama garage baabuurta lagu cilad bixiyo laguna farsameeyo waxaana garaashka loo bixinaa magaca Janatha Garage.
Satyam (Mohanlal) iyo shaqaalihiisa Janatha Garage waxay u dalacayaan inay garaacaan ama cirib tiraan burcada dhibaatada ku heyso dadka masaakiinta ah.
Sidoo kalena Satyam (Mohanlal) iyo garaashkiisa Janatha Garage waxyaabo badan oo deegaanka dhibaato ku ah ayaa lagu farsameeyaa.
Nasiib xumo Satyam (Mohanlal) walaalkiisa ayaa la dilaa sidoo kalena walaalkiis halka wiil ee uu dhalay Anand (Jr. NTR) isagana magaalada Mumbai ayaa loo kaxeesanaa.
20-sano kadib Satyam (Mohanal) waxaa noloshiisa dib ugu soo biirayo wiilka uu adeerka u yahay Anand (Jr. NTR) oo aqoon yahan ah sidoo kalena soo bartay sida deegaanka loo ilaaliyo.
Anand (Jr. NTR) wuxuu wax ka hormarinaa garaashka adeerkiisa iska leeyahay Janatha Garage sidoo kalena deegaankana shacbiyad balaaran ayuu ku yeelanaa.
Balse Anand (Jr. NTR) wuxuu ka biyo diidaa sida adeerkiis dadka u dilo sidoo kalena deegaankana dhibaato ugu haayo.
Sidaa darteed Anand (Jr. NTR) iyo adeerkiis Satyam (Mohanlal) ayaa si toos ah isaga hor imaanayaan waxayna isku noqonayaan labo caddow isku ah.
Dagaalka Anand (Jr. NTR) iyo adeerkiisa ka dhaxeeyo waxaa sii hurinaayo Satyam (Mohanlal) wiilkiisa curudka ah oo rabo inuu hogaanka aabihiis la wareego ayaa wax walbo si xumaan ku dheehan isugu qasaayo!
Hadaba Anand (Jr. NTR) adeerkiisa mala heshiisn doonaa sidoo kalena siduu xal ugu heli doonaa wiilka ay ilmo adeerada yihiin dabka uu marwalbo gadaashiisa ka shidaayo?
Falanqeynta Sheekada Filimka Janatha Garage:
Inkastoo sheekada filimkaan tahay mid la wada fahmi karo hadana Director Koratala Siva wuxuu qaladkiisa ku saxan yahay inuu labada Super Star Mohanlal iyo NTR siiyay labo awood oo kugu qasbi doonto daawashada filimkaan min bilaaw ilaa dhamaad.